UBelkin uvula i-3,5mm + yokutshaja iadaptha ye-iPhone | Iindaba zeGajethi
UBelkin usungule i-3,5mm + iadaptha yokutshaja ye-iPhone
UJose Alfocea | | Izixhobo
Kunyaka ophelileyo, ngokufika kwe-iPhone 7 kunye ne-iPhone 7 Plus, iApple yathatha inyathelo lokuphelisa isixhobo esidala se3,5 mm. kwii-headphone ezinombono we khuthaza ukusetyenziswa kwee-headphone ezingenazingcingo, njengee-AirPods ezithi, ngobuchule, zibonise kwangolo suku. Olunye ukhetho yayikukusebenzisa umbane obandakanywayo kwiadaptha kaJack (ukusebenzisa nayiphi na imodeli yee-headphone), uzenzele izibini zentloko ezinesixhumi sombane. Ngoku sinenye indlela.
Izixhobo ezaziwayo zeBelkin zisungule Iadaptha yeaudio eyi-3,5mm + ukutshaja Iinkwenkwezi zerokhu, isixhobo esincinci esiza kukuvumela ukuba ubize i-iPhone yakho kwaye usebenzise ii-headphone ezinesidibanisi esidala ngaxeshanye. Eyona nto inomdla, ukongeza kwixabiso eliphezulu, kukuba I-Apple sele iqalile ukuyithengisa ezivenkileni zabo.
Mamela umculo kwaye uhlawulise i-iPhone yakho ngaxeshanye kunye neBelkin RockStar adaptha
Akukho mathandabuzo malunga noncedo lwale nto intsha iziswe nguBelkin kwintengiso yemodyuli? Ixabiso le 34,99 euro Nangona kunjalo, kuyahlekisa ukuba, phantsi kwesizathu sokuphelisa iintambo kubomi bethu, iApple ithengisa le nto ezivenkileni zabo. Yiza, iyasityhalela ukuba sibuyisele intambo eyayifudula isimahla kwisincedisi ngoku esixabisa i-34,99 euros. Ewe ndiyazi ukuba umenzi wayo akanguye uApple, kodwa inkampani yaseCupertino iyazamkela zombini ngesitywina seMFi kwaye siyithengise ngokuthe ngqo.
Entsha Iinkwenkwezi zerokhu IBelkin ijongeka ngathi yinto ephuma kumzi-mveliso wentambo kaApple. Kwi ukugqiba okumhlophe okucocekileyo, inesiphelo esinye a Isidibanisi sombane oyindoda uqhagamshela kwi-iPhone 7 yakho, 7 Plus, 8, 8 kunye no-X. kwelinye icala ibonelela ngesixhobo sokudibanisa umbane kunye ne-3,55 mm jack plug. Ngale ndlela unokuqhagamshela ibhetri yangaphandle okanye uyiqhagamshele kumbane wombane, ngelixa umamele umculo owuthandayo ngeefowuni okanye izithethi.
Ucinga ntoni ngalo mbono? Ngaba uceba ukufumana le adaptha?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » UBelkin usungule i-3,5mm + iadaptha yokutshaja ye-iPhone
UManolo Lama ubaleka ephila, siza kuba neNdebe yeHlabathi yeFIFA ka-2018